China Outdoor mens windproof jacket ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးမြင့်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ။ Ruisheng
အပြင်ဘက်မှ mens windproof jacket ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးမြင့်မားပါသည်
အလွှာများမှန်ကန်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်ပင်တစ်ခါတစ်ရံလေသည်အလွန်အေးနိုင်သည်။ သင်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့လေထန်တဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခွေးကိုအိမ်ထဲကနေထွက်ခွာစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ windproofjackets mens တွေကနေနွေးထွေးခြောက်သွေ့စေဖို့ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကနွေးထွေးမှုနှင့်လေကိုအားနည်းနေစေရန်အဘို့ဒီဇိုင်းနောက်ဆုံးပေါ်ယောက်ျားရဲ့ windbreaks နှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီ၏ကျယ်ပြန့ကိုဆက်ကပ်။
မူလနေရာ - Jiangsu၊ တရုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ် OEM
မော်ဒယ်နံပါတ်: နှင်းလျှောစီးဂျာကင်အင်္ကျီလိုဂို: လက်ခံသူဖောက်သည်လိုဂို OEM
အရွယ်အစား size မည်သည့်အရွယ်အစားမဆိုရရှိနိုင်သည်အရောင်များ - တောင်းဆိုထားသောအရောင်များ
အဆင့် - အဆင့် A ပစ္စည်း - Polyester / Customization၊ တောင်းဆိုထားသောပစ္စည်း
အသက်အရွယ် - အရွယ်ရောက်သူများပုံစံ - ဂျက်ကတ်များ၊
အသွင်အပြင် - ဆန့်ကျင်သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ အသက်ရှူနိုင်သောအပူချိန်၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ ရေစိုခံလုပ်ဆောင်ချက် - ရေစိုခံ၊
အနိမ့်စျေး: Big ပမာဏညှိနှိုင်း
1， ၎င်းသည်ပေါ့ပါးပြီးပေါ့ပါးသည့်အတွက်စိုထိုင်းသောဝန်းကျင်တွင်သင်ခရီးသွားနေစဉ်၎င်းကိုအရေးပေါ်ပစ္စည်းအဖြစ်သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ သင်၏ဘယ်ဘက်အိတ်ထဲတွင်ဝှက်ထားသည့်အတွက်၎င်းကိုသင်လွယ်ကူစွာထည့်နိုင်သည်။
2， အသုံးဝင်သောဒီဇိုင်းအသေးစိတ်များတွင်ခေါက်ထားသည့်အဖုံးတစ်ခု၊ ရင်ဘတ်အိတ်တစ်ခုလုံးနှင့်အတွင်းပိုင်းလေပေါက်ပေါက်များပါ ၀ င်သောချိန်ညှိ။ ခမောက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည့်ပါးပျဉ်းပါ ၀ င်သည်။
3， အထည်ကိုယ်ထည်သည်လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမွန်ပြီးအားကောင်းသောဒီဇိုင်းလုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။ လွယ်ကူစွာတင်းကျပ်ရန်အတွက်အနားနှင့် cuffs မှ elastic၊ အိတ်ကပ်တစ်ခု၊ ကွက်ကြိုးနှစ်ချောင်း၊ လက်ဆွဲအိတ်ကပ် (လေဝင်လေထွက်အတွက်) နှင့် zippers များ။ အဆိုပါပါးပျဉ်းတစ်ဆူးနှင့်အတူအလွန်ကောင်းသောသည်နှင့်ကော်လာအပေါ်ချိန်ညှိခဲ့သည်
1. ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များစွာသောနိုင်ငံတကာအမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်သည်။ တချို့က ၅ နှစ်မှ ၈ နှစ်အထိငါတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရောင်းအဖွဲ့ ၂ ခုရှိသည် - အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အထည်။ အရောင်းတစ်ခုစီတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၈ နှစ်ရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ထုတ်ကုန်အားလုံးအဘို့သင့်ကို One-stop ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်။ ကောင်းမွန်သောအဖွဲ့လိုက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ၂ နာရီအတွင်းစုံစမ်းမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြေကြားပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းယဉ်ကျေးမှုသည်တိုးတက်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အားကြီးသောထိန်းချုပ်မှုရှိသည်။ lianyungang မှ ၂၃ နာရီအကွာတွင်ကိုယ်ပိုင်စက်ရုံရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထည် / ပစ္စည်းများကိုစုစည်းသည်။ ဥပမာ - ချည်မှဆိုးဆေးအထိရက်လုပ်သည်အထိထိန်းချုပ်သည်။ ဒီဇိုင်း၊ အနုပညာလက်ရာများ၊ ပထမ ဦး ဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံ၊ နောက်ဆုံးရှေ့ပြေးပုံစံ၊ PP နမူနာ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအထိဝန်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့အပြည့်အ ၀ ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ရှေ့သို့ mens ယောဂအဝတ်အစား Tummy Control အမြင့်ခါးလေ့ကျင့်ခန်း Yoga Leggings